I-oyile ehlikiweyo iBronze Igumbi lokuhlambela leSink Faucet 2-Handle 4 Inch Centreset
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Iziko lokuqubha leepompo zangasese / WOWOW I-oyile ehlikiweyo ngeBronze Igumbi lokuhlambela leSink Faucet 2-Handle 4 Inch Centreset
I-WOWOW faucet ye-100 yepesenti UVAVANYO LOKUVAVANYWA-zonke iimpompo zihlalutyiwe phantsi koxinzelelo oluphezulu lwamanzi ukuqinisekisa umgangatho ophezulu kunye nonyamezelo. I-4 intshi yeepompo zokuhlambela ezigcweleyo, umgangatho ophezulu wokwakha ubhedu ukuphela kwenkulumbuso eyilelwe ukusebenza koBomi kuyilo lwangoku.
2321200RB imiyalelo yokufaka
Iinkcukacha ngeefompu zangasese zebrashi yokuqubha yeoyile 2321200RB iinkcukacha:
Ukuba ucinga ngeemveliso zethu zamva nje, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi ngexabiso leendleko.
IZIKO: I-classique yoyilo lwebhendi enentonga yokunyusa kunye nokumisa okumisa. Igumbi lokuhlambela ngamanzi angoompompi elinamagumbi amabini kuphela e-BANDROOM YOKUGQIBELA: Umbhobho ophethe kabini uqonde ukulungisa amanzi kunye nolawulo lobushushu bamanzi.
ICANDELO LOKUSETYENZISWA KWEENDLU EZIQHUTYWA: I-oyile yokucoca ibhafu yobhedu yokuhlambela ibandakanya indibano yokuhambisa amanzi, amanzi avela kumpompo ngokucinezela intonga yesinyusi, ukuthintela ukubamba izandla zakho ezihlanjwe phezulu.
SINK FAUCET OIL YENZELWE IBHronI: ezimbini zisingathe isimbo sokuyila setephu yakudala. Umlo umhlwa. Idikki ekhwele itompu yelize ilungele indlu yerenti, indlu entsha yokuhlala, igumbi elinye, imoto yeemoto, itreyila yohambo kunye nokusetyenziswa kwekhaya. Nceda unxibelelane nathi ukuba unayo nayiphi na imibuzo.
I-SKU: 2321200RB iindidi: Iziko lokuqubha leepompo zangasese, Ukuhlamba igumbi lokuhlambela tags: indawo yokugcina iziko, kwigumbi lokuhlambela le-intshi, Ibronze yeBhotile yeoyile